Pfungwa neMwoyo - Manzwiro muChidzidzo neKutonga (Koramu 467) - Rabbi Michael Avraham
Rabhi Michael Avraham
Mhinduro - Main
Mhinduro - Halacha
Mhinduro - Meta Halacha
Mhinduro - Rutendo
Mhinduro - Tora neSainzi
Responsa - Chidzidzo cheTalmudic
Mhinduro - Philosophy
Responsa - tsika
Zvakatumirwa kubva kuforamu "Rega kufunga pano"
Shiurimi yakanyorwa paMaturakiti eShas
Manotibhuku panyaya dzekutenda
Reference kune iGod mavhidhiyo
Uropi neMwoyo - Manzwiro Mukudzidza uye Mukutonga (Koramu 467)
45 makomendi	/ T. Benisan 10 - 04/2022/XNUMX 10 / 04 / 2022
Mazuva mashomanana apfuura, vakauya kune peji Daf La Bibamot, apo nyaya inofadza ye "Imba yakawira paari uye muzukuru wake anooneka uye hazvizivikanwi kuti ndiani wavo akafa pakutanga, akacheka shati yake uye haana kuchema."
Hayuta Deutsch yakanditumira ichi chinyorwa neinotevera chirevo:
Yakakura! Muenzaniso wepamusoro (mumwe wemizhinji asi yakanyanya kunaka) yekusangana pakati pe 'rabhoritari' yepamutemo halakhic nyika uye inoshamisa chokwadi (yakanaka uye inochemedza telenovela).
Mukati mekurukurirano yakatevera pakati pedu pashure pacho, ndakafunga kuti zvakanga zvakakodzera kugovera koramu kuizvi zvinhu.
Emotional uye hukuru hwevanhu mune halakhic nyaya
Paunofunga nezvemamiriro ezvinhu aya uye uchipinda mazviri zvishoma padanho repfungwa, idambudziko risiri nyore rakawira mhuri iyi inosuruvarisa (imwe neimwe nenzira yayo, rangarira). Asi ini semudzidziwo zvake handina kumbozviona. Iyi nhaurirano inonakidza uye yakaoma halakhic, uye kwandiri hapana vanhu vanotambura pano, kureva, vanhu. Zvose izvi zviumbwa kana mimvuri pane halakhic-intellectual stage. Zvinangwa zveunhu zvekudzidzisa pfungwa, kuburikidza iyo zvakanyanya kuitirwa kuratidza halakhic mazano. Muchidzidzo chedu tinobata nemhondi, mbavha, vatengesi venyama, varevi venhema, njodzi nemhando dzakasiyana-siyana dzinosuwisa uye tinokurukura zvose izvi nekuenzanisa kunoshamisa. Saka vana muHyderabad vanogona kudzidza nyaya dzine mhosva, kunyangwe kutevera kusangana kwakadaro mumamiriro ese ezvinhu vabereki vavo vangadai vakatungamirwa mushure mekuremekedza kugara zvakanaka uye ivo pachavo vangadai vakasiiwa nemutauro wakadonha mukuvhunduka. Asi iyi parade yese inopfuura nerunyararo nesu uye isu hatiropi ziso.
Ini handisi kuona mumashoko emhuka yake kuzvidza. Pane zvakasiyana, vanoyemura kudzokororwa pakati pendege dzekukurukurirana (munhu uye halakhic), asi zvakadaro ndakanzwa kumashure toni yekutsoropodza kutonhora kwenhaurirano, i.e. kusakoshesa kuomarara kwevanhu venyaya iyi. VaGemara vanotsanangura nyaya iyi vachiita senhindi yenyama yawira mumuto wemukaka, voenderera mberi vachikurukura nezvemitemo inoshanda panyaya yakadai. Haanyatso furatira nhamo dzevanhu dzakaitika pano. Mhuri yakafirwa iyi inosara isina mudzimai (chaizvoizvo imwe yenhamo) uye mukoma avo vose vari vaviri vanobva kumhuri imwe. Ndiani anosara achitsigira nherera? (O, hapana chaizvo, dai zvisina kudaro pangadai pasina kuva nealbum pano.) Mwoyo Ndiani asingazochemi uye ziso ripi risingadere pakunzwa kwezvose izvi?! Pamusoro pazvo, panzeve dzemweya yedu isinganzwe.
Ini ndinofunga mutinhimira wandakanzwa mumashoko emhuka yake, wakavakirwa pasina chikamu chidiki pane zvandinosangana nazvo zuva nezuva mubeit midrash yevadzidzi vechiremba kuBar Ilan (uye mune mamwe marongero echikadzi). Kanenge nguva yese yatakasvika kunyaya yakadai, pave paine mareferensi asina kusimba kubva kumunhu uye kukosha uye kunyanya manzwiro emamiriro ezvinhu akadaro, uye zvechokwadi kushoropodzwa kweGemara uye kusakoshesa kwevadzidzi kune izvi zvinhu. Kutonhora uye kusava nehanya kwaanoratidza hazvinzwisisiki uye hazvigoneki. Isu tose takajaira kudzidza nyaya yababa vachipa mwanasikana wavo muduku kumurume akabikwa, mukadzi akarambidzwa nokuda kweizvi uye izvo, agunot pasina nzira yekubuda nayo, "akanamatira papuratifomu yake" uye mamwe kukurukurirana kweLithuania mu. Talmud.
Ndinozvibvumira kuti nditaure kubva pane zvakaitika kuti idzi idzokorodzo dzinoratidza vakadzi vakawanda (uye vateveri, izvo zvinenge zvakafanana. Ona somuenzaniso mumakoroni 104 uye-315). Hazvina maturo kutaura, maLithuanians seni haana kusununguka kubva pamanzwiro akadaro muBH. Ndaitopawo mazano kune vatungamiri ve telenovela iyoyo: Somuenzaniso, vangaita zvakanaka kana vakaurayawo mudzimai wechipiri wemukoma ndokumubaya padumbu, anova mai muHebheru wemuzukuru womwanasikana wake, uyo ari hafu. muranda nehafu yakasununguka yakapondwa naGarma.Iri iri pakati peizwi nekunyudzwa mumikveh ine matanda matatu emvura yakapombwa isina dhabhi inoita senge waini. Vaigona kudzidza kubva pane zvakanakisa, ndiko kuti, chiichinzvimbo. Izvi zvingadai zvakapfumisa hurukuro uye kuita kuti inakidze zvikuru.
Kutsoropodza kwakafanana mune imwe mamiriro
Uku kutsoropodza hakuna kunangana chete kuTalmud nevadzidzi vayo. Muchikamu 89 Ndakapa muenzaniso wekutsoropodza kwakafanana, uye panguva ino mune zvedzidzo-tekinoroji mamiriro. Ndinoreva nyaya inozivikanwa kwazvo pamusoro pechubhu yeropa paTechnion (iyo ingangove yaive uye yakasikwa). Ndichakopa zvinhu kubva ipapo.
akaudza Pachikumbiro chaProf. Haim Hanani weTechnion, icho chakaguma nomuedzo wokuyerera muFaculty of Mechanical Engineering, vadzidzi vakakumbirwa kugadzira pombi yaizotakura ropa kubva kuEilat kuenda kuMetula. Vakabvunzwa kuti vogadzira zvinhu zvipi, dhayamita uye ukobvu hwayo hunofanira kuva hwakaita sei, pakadzika zvakadii muvhu pakuiviga nezvimwe zvakadaro. Vatauri venyaya iyi (uye ini pachangu ndakanzwa nenzeve dzangu dzakashamisika vamwe vanhu vakakatyamadzwa nehunhu nenyaya iyi. Hazvidi kuti nditaure ndakashamiswa kwazvo nekuvhunduka kwavo) vachinyunyuta kuti vadzidzi veTechnion's technocratic, avo vakarasika kare kare. mutori wemifananidzo wevanhu (kusiyana nemaPhD mune zvechikadzi nehupfumi hwepamba Vane ruzivo rwakanyanya rwetsika, kunyanya kana vakagadzira chubhu inotungamira zvinyorwa zvavo zvakanangana nehurongwa hweNhoroondo), gadzirisa bvunzo uye uipe pasina kurova ziso uye. kubvunza kuti nei chubhu yeropa yakadaro ichidikanwa. Kungowedzera kushamisika, anoti zvinonzi ongororo yakadai yakazoita kuti zvidzidzo zvehumanities zvipinzwe mugwaro reTechnion. Sezviri pachena mumwe munhu akatora ongororo iyi zvakanyanya.
Pamusoro pemubvunzo wekuravira uye kuseka kwemunyori webvunzo izvo zvinogoneka kukakavara (kunyangwe mumaziso angu zvichinyanya kufadza), tsoropodzo pachayo inoratidzika kwandiri kupusa. Dambudziko nderei nemubvunzo wakadaro?! Uye kuti chero munhu anofungidzira kuti mudzidzisi aida kuronga musasa wevasungwa uye ari kubatsira vadzidzi mukugadzirisa dambudziko rekutakura ropa? Vadzidzi vakapedza bvunzo vaifanira kufungidzira kuti ndizvo zviri kuitika uye kuratidzira? Mavakirwo nemhinduro yemuyedzo wakadaro hairatidzi hupombwe munzira ipi neipi, kana mwero wekunzwira tsitsi kwemudzidzisi kana wevadzidzi. Nenzira, kunyange uku kutsoropodza kusina maturo hakuratidzi kukwirira kwepamusoro kwekunzwa kwetsika. Kunyanya kubhadharisa mutero wekuzivisa, uye hupenzi, kune kuomarara kwezvematongerwo enyika uye manzwiro asina kufanira.
Kunze kwemubvunzo wekuti zvakanaka uye zvine musoro here kupa mubvunzo wakadaro mukuyedzwa, ndinoda kutaura kuti vadzidzi vakasangana nazvo uye vakagadzirisa pasina kubwaira kweziso vakafanana chaizvo nenyanzvi dze halakhic dzinopfuura nemamiriro akaita se. iya yandakarondedzera neziso riya rakaoma nechando. Mubvunzo wemamiriro ezvinhu. Kana mamiriro acho ari halakhic kana sainzi-tekinoroji, uye zviri pachena kune wese kuti hapana munhu pano anoda kuuraya kana kutakura ropa, hapana chikonzero munyika chekuti moyo yavo idedere kana kufara nazvo. Ivo zviri nani vasiye macheki ezviitiko chaizvo. Kana paine munhu ane tambo dziri kudedera zvakanaka hazvo. Munhu wese nemagadzirirwo ake epfungwa, uye sezvatinoziva hapana akakwana. Asi kuona ichi sechimiro chinoratidza hunhu hwemunhu uye pasina kubvunda chiratidzo chehutsika uhwu hwakakanganisika kazhinji joke rakashata.
"Mazaya anga akangwara, aona zvisina maturo chii?"
Mumwe anogona zvakare kuyeuka midrash yengano yaKorach Zatzokal uyo akanyunyuta nezvaMoshe Rabbeinu (Mutsvaki akanaka, Mapisarema a):
“Uye pachigaro cheZim” pane chando, icho chaiseka pamusoro paMosesi naAroni
Aizi yakaita sei? Ungano yose yakaungana, zvikanzi, “Ungano yose ngavaunganidzire chando,” akatanga kuvaudza mashoko okupenga, akati kwavari: “Kwaiva nechirikadzi yomunharaunda yangu uye paiva nemhandara mbiri dzaiva nherera; akava nomunda mumwe. Akasvika kuzorima, Mozisi akati kwaari, Usarima nzombe nembongoro pamwechete. Akauya kuzokusha - akamuudza kuti: "Zamu rako haringadyari mahybrids." akauya kuzocheka uye akaita murwi, akati kwaari: Isa muunganidzwa wekukanganwa uye wigi. Zvino wakati achisvika kuvaka nheyo, akati kwaari: Ipa chipo, nechegumi chekutanga, nechegumi chechipiri; Akaruramisa mutongo paari ndokumupa.
Murombo uyu akaita sei? Vakamira vakatengesa munda ndokutenga makwai maviri ekuti vapfeke machira avo vachifarira mombe dzavo. Kubva pavakaberekwa, Aroni akauya akati kwaari, “Ndipe dangwe; Akaruramisa mutongo paari uye akamupa mazvara. Zvino nguva yokuveura nokuveura yasvika; Aroni akauya kwaari, akati kwaari, Ndipei chokutanga chemhepo, sezvakarehwa naMwari;
Iye ndokuti: Handina simba rekumirisana nemurume uyu; Zvino akati adziuraya, Aroni akauya kwaari, akati kwaari, Ndipe ruoko, nedama, nedumbu; Iye akati: “Kunyange ndapedza kuvauraya, handina kumubvisa – ava kundiramba! Aroni akati kwaari, Kana zviri izvo, zvose zviri zvangu, ndizvo zvakataurwa naMwari, kuti, "Kurasha kose kwaIsiraeri kuchava kwako." Natlan akaenda kwaari ndokusiya achichema iye nevanasikana vake vaviri.
Ndokupinda kwaakaita munhamo iyi! Saka vanoita uye vanonamatira kuna Mwari!
Zvinorwadza moyo, handizvo here? Zvinotiyeuchidza ongororo yandakatsanangura pamusoro, kunyangwe paine musiyano pano zvakadaro. Kutsoropodza kwaIce kunazvo mazviri. Anogona kutora zvinhu muchirevo uye kugadzira nyaya inoshungurudza, asi ichokwadi kuti nyaya yakadai inogona kuitika, uye ndiyo murairo we halakhic wemamiriro ezvinhu akadaro. Ndicho chikonzero nei pane dambudziko pano kune tsika dze halakhah, uye ichi chirevo chakakomba. Ndakambotaura nezvako kakawanda Israeri yakatamba, Nyanzvi yekemisitiri yokuJerusarema, yaiwanzogadzira nyaya dzokupera kwetsika dze<em>halakhah nedzechitendero, uye anonyandura mhirizhonga. Vanamati vakatura befu pavakaona kuti nyaya yakadai haina uye haina kugadzirwa, asi ndaigarozvibvunza kuti sei ine basa. Chokwadi halachah inorambidza nzvimbo yeSabata kuchengetedza hupenyu hwemuhedheni. Zvechokwadi, mutemo unoda kuti mudzimai weCohen abatwe chibharo nemurume wake. Saka kunyangwe zvisina kuitika, iko kutsoropodza kuri pamutemo.
Mupfungwa iyi, kutsoropodza kwaShakaki naKoraki kwakafanana zvikuru netsoropodzo dzataona pamusoro apa dzinobata nyaya yekufungidzira uye kuenzana kune musoro kwaari. Izvo hazvina chekuita nehuwandu hwehunhu hwevanhu kana hweharakhah.
Ngatitarisei kune matambudziko nekuongororwa kwechubhu yeropa kana telenovela pachikuva. Iyi inyaya yekufungidzira isina kunyatsoitika. Takatarisana nenyaya chaiyo yakadai, ndinofungidzira kuti hatizorambi tisina basa nazvo. Kusava nehanya kunogadzirwa pano nekuda kwekufungidzira kwechiitiko chechiitiko icho chakajeka kune vose vanobatanidzwa, uye nekuda kwechirevo chehurukuro. Chirevo chinomuka nyaya idzi ndechepfungwa-nyanzvi. Mubvunzo muinjiniya unodudzirwa muchirevo chayo sedambudziko remakomputa-tekinoroji, uye nenzira kwayo hapana anonetswa nechinangwa chekuverenga (nekuti zviri pachena kune wese kuti hakuna chinhu chakadaro. Chokwadi chiripo, kuyedza mudzidzi kugona). Izvi zvakafanana nezve telenovela pachikuva. Zviri pachena kune vese kuti iyi inyaya yekufungidzira yakagadzirirwa kurodza halakhic nzwisiso. Kuita fungidziro sekuti zviri kuitika zvechokwadi inyaya yemwana, handizvo here? Vana vanowanzotora nyaya senyaya chaiyo. Vakuru vanofanira kunzwisisa kuti izvi hazvisizvo. Sekuona kwangu, izvi zvakafanana nemibvunzo nezvenyaya dzeTalmudic dzakadai saGamla Farha (Mechot XNUMX: XNUMX uye Yevamot Katz XNUMX: XNUMX), kana Hittin akadzika mumatenhere (Minchot Set XNUMX: XNUMX), anoshamisika kuti nyaya yakadai ingaite sei. kuitika. Pakucherekedza mashoko akapoteredza, zvinofanira kuva pachena kuti hapana ari kutaura kuti ikoku kwakanga kwakadaro kana kuti zvinogona kuitika. Idzi inyaya dzekufungidzira dzinoitirwa kunatsa misimboti ye halakhic, senge kesi dzemurabhoritari mukutsvagisa kwesainzi (onaZvinyorwa PaOkimas).
Muchidimbu, dambudziko reongororo iyi nderekuti vanofungidzira kuti munhu anofanirwa kubata nyaya yekufungidzira inouya pamberi pake sekunge pane chiitiko chaicho pano. Iwe unogona kupa muenzaniso kubva mufirimu kana bhuku rinotsanangura mamiriro ezvinhu akadaro. Ona kuti ndiani aisazokoshesa Bhaibheri kana kuona mamiriro ezvinhu akadaro. Zvakasiyana papi? Pashure pezvose, mubhaisikopo kana kuti bhuku tinofanira kunzwa manzwiro akadaro ndokupinda mumamiriro ezvinhu. Mhinduro kune iyi iri mumaonero angu: 1. Zita rechirevo chechinyorwa inyanzvi, zvinoreva kuti mutengi (muoni kana muverengi) anofanira kuedza kupinda mumamiriro ezvinhu uye azvionere. Uyu ndiwo musimboti wekutiza kwehunyanzvi. Asi hazvipo mumamiriro ezvidzidzo kana tekinoroji-mudzidzi. 2. Kunyange kana zviri zvechisikigo kuti kufamba kwepfungwa kwakadaro kunoitika muvarume (kana vakadzi), hakuna kukosha. Kana izvo zvikaitika - saka zvakanaka (hapana akakwana, rangarira). Asi kutaura kunobva kuvanhu muzita retsika kuti zvinofanira kuitika kwavari inyaya yakasiyana zvachose. Kuona munhu asina izvi sehurema husina maturo mumaziso angu.
Mhosva chaidzo: kukosha kwekubvisa
Ndakaita nharo kuti kupindira mupfungwa munyaya yekufungidzira inyaya yemwana zvachose. Asi pamusoro pazvo, ndinoda kuita nharo ikozvino kuti inewo chiyero chinokuvadza pairi. Apo kutsoropodza kwadudzwa pamusoro pevadzidzi vechiremba kwakamuka, ndakaedza kuisa mukati mavo zvakare uye zvakare kukosha kwekunetseka mupfungwa uye mupfungwa kubva mumamiriro ezvinhu pakubata ne halakhic scholarship. Hakusi chete kubatanidzwa kwemirangariro kwakadaro hakuna ukoshi, asi kunokuvadza chaizvoizvo. Kubatanidzwa mupfungwa uye mupfungwa kunogona kutungamirira kune kukanganisa halakhic (uye teknolojia) mhedziso. Mutongi anosarudza nyaya nekuda kwemanzwiro ake mutongi akaipa (chaizvoizvo, haitongi zvachose. Ingodanidzira).
Ziva kuti pano ndave kutotaura nezvenyaya yemunhu kunyaya chaiyo inouya pamberi pangu, kwete kungofungidzira. Kana ndikasangana nenyaya yehama nehanzvadzi vakaparara pamwechete munjodzi inotyisa, inyaya chaiyo yakaitika muchokwadi, saka pakadai panofanirwa kuve nekukosha kwekunzwisisa kune zviyero zvevanhu mairi. Pano pane zvechokwadi kukosha uye kukosha mukurapa nyaya iyi pamatanho ese panguva imwe chete: intellectual-halakhic, yehungwaru-tsika uye ruzivo rwemunhu. Uye zvakadaro, kunyange mumamiriro ezvinhu chaiwo, zvakakodzera muchikamu chekutanga kutarisa ndege yekutanga uye kuparadzanisa mamwe maviri. Mutongi gava anofanira kufunga zvakatonhora pamusoro penyaya iri pamberi pake. Zvinotaurwa ne halakhah hazvinei nechokuita nezvinorehwa nemanzwiro (uye mumaonero angu kwete kunyange zvinotaurwa nehunhu), uye zvakanaka kuti zvinoita. Murevereri anofanira kucheka mutemo nekudzikama, uye nekudaro ave nekodzero yekutungamira chokwadi cheTorah. Padanho mushure mekutonhora halakhic kuongororwa, pane nzvimbo yekupinda mupfungwa mumamiriro ezvinhu uye maitiro ayo ehutsika uye evanhu, uye kuiongorora mune aya maonero zvakare. Izvi zvinoreva kuti kana iyo yekutanga halakhic ongororo inosimudza akati wandei angangoita sarudzo, munhu anogona kufunga nezve manzwiro uye hukuru hwevanhu uye hutsika kuitira kuti asarudze pakati pavo uye sarudza iyo inoshanda kutonga. Manzwiro haafanire kutora chikamu mukuongorora zvine musoro, asi kazhinji huya shure kwayo. Kupfuura izvozvo, iwe unogona kuona kukosha mukugovana uye kunzwira tsitsi nekutambura kwemunhu ari pamberi pako, kunyangwe isina halakhic zvinoreva. Asi izvi zvese zvinofanirwa kuitika pane dzakafanana ndege, uye zviri nani zvakare kunonoka kune yekutanga halakhic sarudzo. Kubatanidzwa kwepfungwa mukutonga hakudiwi zvachose.
Ini handisi kuzodzoka pano zvakadzama kune imwe chirevo chandakatoita kakawanda (ona semuenzaniso mukoramu 22, Uye munhevedzano yemakoramu 311-315), Kuti tsika hadzina chokuita nemanzwiro uye hapana. Hunhu chinhu chenjere kwete chepfungwa. Dzimwe nguva manzwiro chiratidzo chekutungamira kwetsika (tsitsi), asi chiratidzo chinonetsa zvikuru, uye zvakakosha kuchenjerera kutsoropodza uye kwete kuitevera. Muremekedze uye umufungire. Pakupera kwezuva, sarudzo inofanira kuitwa mumusoro kwete mumoyo, asi musoro unofanirawo kufunga izvo mwoyo unotaura. Kupokana kwangu kwaive kuti kuzivikanwa mune yeruzivo rwemanzwiro hakuna kukosha kwezvinoreva. Uhu hunhu hwemunhu, uye sezvakadaro ichokwadi. Asi haina kukosha, uye avo vasina kuisirwa nayo havafanire kunetseka pamusoro pehunhu hwayo uye kukosha kwayo.
Mukuona kweizvi, ndinopikisa kuti kunyange muchikamu chechipiri, mushure mekutanga halakhic kuongororwa, hapana nzvimbo inokosha yemanzwiro. Nokuti tsika zvichida hongu, asi kwete nokuda manzwiro (per se. Asi zvichida sechiratidzo uye zvichingodaro). Mukupesana, kubatanidzwa mupfungwa muyedzo wemishonga yekunyengera kusina kufanira nekutsauka kwekufunga, uye pakuita zvisarudzo zvisiri izvo.
Mhedziso kubva kune izvi zvese ndeyekuti kana uchidzidza halakhic Talmudic nyaya hapana kukosha kwekubatanidzwa mupfungwa, uye munhu anofanirwa kuedza kukurira kufamba kwepfungwa kwakadaro kunyangwe kuripo (ndiri kutaura nezveavo vasati vakwanisa kukunda. izvozvo uye zvijaire). Mukuita halakhic rulings (kureva sarudzo pane imwe nyaya inouya pamberi pedu), apo manzwiro uye tsika dzinofanira kumiswa, uye zvichida kupiwa imwe nzvimbo muchikamu chechipiri (kunyanya tsika. Kuti manzwiro mashoma).
Pane gakava pamusoro pechishandiso chechikamu chekuti munhu anodzidzira kusabata munhu achifungidzira mumamiriro ezvinhu ekufungidzira akadaro haaite zvimwe chete maererano nezviitiko chaizvo. Ndinokahadzika zvakanyanya. Kwandiri rinonzwika seshoko rakanaka rezvikomborero zvinomwe, uye handioni chiratidzo chekururama kwaro. Chero zvazvingava, ani naani anotaura izvi anofanira kuunza uchapupu kumashoko ake.
Kutaura kwakafanana kunogona kuitwa pamusoro petsika yemhizha. The Gemara anoti muimbi, chiremba kana munhu aibata nevakadzi, "muuranda hwake vanonetswa", uye saka akamubvumira zvinhu zvinorambidzwa vamwe varume (singularity kana kuonana nomukadzi uye zvakafanana). Kuve akabatikana mubasa rake reunyanzvi kunodzima manzwiro ake uye kunodzivirira mhosva uye kufunga kunorambidzwa. Handizive kana bonde re gynecologist rakagomara nekuda kwaro, kunyangwe paanosangana nemukadzi pane zverudo uye zvisina basa. Ini ndinokahadzika kuti iyi inyaya yakasiyana, asi inoda kuongororwa. Vanhu vanoziva kugadzira kupatsanurwa uye kudimbura, uye mupfungwa iyi Dayan anodzidzawo muAbidathiyahu Tridi. Kana munhu achiita basa rake anoziva nzira yekudzivirira nayo manzwiro ake, uye hazvirevi kuti ivo vanonyanya kuoma mune mamwe mamiriro ezvinhu. Hongu, nyanzvi yemifananidzo yakabatikana nehunyanzvi hwayo inzvimbo inosvika kure kupfuura mamiriro ataurwa pamusoro apa mukudzidza kwe halakhic, sezvo kune muimbi ava vakadzi uye mamiriro chaiwo, nepo kune nyanzvi idzi inyaya dzekufungidzira. Naizvozvo, kunyangwe tikaona kuti manyawi enyanzvi anodzikira, hazvirevi hazvo kuti ndizvo zvinoitika munyanzvi. Zvichida kwakafanana zvikuru nomutongi anobvisa mirangariro yake, sezvo mutongi anotarisana nemhaka chaidzo asi achizviita nenzira younyanzvi. Ikoko kunogona kunzi muunyanzvi hwake ari kunetseka.
Zvinogona kupokana kuti mudzidzi anosangana nemamiriro ezvinhu akadaro uye asingamutsi maari manzwiro akakodzera evanhu haapindi zvakakwana mumamiriro ezvinhu. Uku kukakavara kwaari padanho redzidzo, uye kwete padanho retsika. Zvinonzi ari kudzidza zvisina kunaka kwete kuti munhu ane nzenza. Handifungi kuti ndizvo zvazviri. Munhu anogona zvamazvirokwazvo kupinda mumamiriro ezvinhu mumugariro wedzidzo kunyange kana asiri mauri mukutaura kwomunhu. Nharo yangu, hongu, inoenderana nemaonero e halakhah sebasa rehunyanzvi-tekinoroji risingasanganisire ndege dzemanzwiro (kunze kwechikamu chechipiri, nezvimwewo). Zvakadaro, chikanganiso chetsika handisi kuona pano.
 Hameno kuti zvine chekuita nehunhu hwechikadzi. Izvi zvinogona kunge zviri nekuda kwezvitsva zvezvinhu, sezvo vakadzi vanga vasati vajaira nyaya idzi kubva paudiki.
 Chigumisiro pachacho chinogamuchirwa mumaonero angu. Izvo hazvina kukuvadza kuti vadzidzi paTechnion vadzidze humwe hunhu. Asi hapana hukama pakati peizvi uye nyaya yemudziyo weropa. Mhosva yacho hairatidze chero dambudziko rinoda kugadziriswa, uye dai paive nedambudziko rakadaro, zvidzidzo zvevanhu zvaisazobatsira neimwe nzira kugadzirisa kwayo.
 Rashi Mugwenga XNUMX, p.
Mhinduro kune Mhedziso muna Mwari
Mhinduro kuhurumende yechiJudha
Mhinduro kune hapana chirevo pamusoro penyika isingagoni kurambwa
45 Pfungwa dziri pa "Pfungwa neMwoyo - Manzwiro muChidzidzo uye Mutongo weHalacha (Koramu 467)"
T. muNissan 10 - 04/2022/01 pa56:XNUMX
Iyo halakhic nyaya yataurwa pano yakashorwa muchokwadi, kana ndikarangarira nemazvo, zvichitevera kupondwa kwenhengo dzemhuri yekwaMaklef muMotza panguva yezviitiko zveXNUMX.
Gumi nembiri yeNissan 13 - 04/2022/14 pa39:XNUMX
Ndine urombo ndakanganisa, ndichireva kupondwa kwemhuri yekwaUnger muSafed, imwe yemhinduro muAhiezer HG Lag.
Yegumi nematatu yeNissan 13 - 04/2022/14 pa53:XNUMX
Unowana sei mhinduro? Ndinoda kuona kwakabva. Ndatenda.
Yegumi nematatu yeNissan 13 - 04/2022/17 pa23:XNUMX
Ndichapfupisa muchidimbu zvakataurwa ipapo.
A. Mhosva yakaonekwa muchikamu:
[Murume akaroora muzukuru wake nemumwe mudzimai. Kana akafa saka mukoma wake haakwanisi kugara nemuzukuru wake (pubic) uye naizvozvo iye nemumwe mukadzi ari kushaiwa havabviswi kubvisa pamuviri uye kubhadhara (kubvisa pamuviri kwakarambidzwa). Kana mwanasikana wemuzukuru wake akafa murume wake asati afa uye murume wake akazofa saka panguva yekufa kwake mumwe mukadzi wacho haanyari nokudaro anoda mwana.]
Mutongo uri muGemara unoti kana munhu asingazive kuti ndiani akatanga kufa, kuti murume ndiye akatanga kufa uye mudzimai wake (muzukuru wake) akanga achiri mupenyu uyezve mumwe mukadzi afa nezvinonyangadza, kana kuti mukadzi ndiye akatanga kufa, murume obva afa. zvino mumwe mudzimai ane chikwereti chomwana. [Uye mutemo ndewekuti pane kupokana kuti zvinosungirwa muBibom here kana kuti zvinorambidzwa muBibom kozoita hembe kwete Bibum].
B. Nyaya yaAhiezeri:
[Murume akafa uye panguva yekufa kwake akasiya mbeu kana chibereko chinoshanda mudzimai wake haasunungurwe panyanga. Asi kana akanga asina mwana zvachose kana kuti munhu wose akafa asati afa ipapo mudzimai wake anofanira kuva bibhom. Kana akafa uye akasiya mwana achangoberekwa mushure mekufa kwake uye akararama kweawa imwe chete uye akafa, kana kusiya mwanakomana ari kufa, imbeu yezvose uye mudzimai wake anosunungurwa pachinhu chinosemesa.]
Musungwa muna Ahiezeri ndibaba vakafa uye panguva yekufa kwavo vakasiya nyama yemhuka yakafa zuva rimwe chete mushure mababa vake, kana mwanakomana anodya nyama achionekwa sembeu yechinhu chese sekufa uye mukadzi akafa anosunungurwa kubva pachinhu chinonyangadza, kana carnivore (uyo angangofa mukati memwedzi gumi nemiviri). [Rose Bindu anofunga kuti kudzvinyirirwa hakuonekwe semupenyu zvachose uye kwakaipa pane kufa uye mukadzi akafa anofanira kunge ari bibom. Ahiezer anoratidza kubva mukuwedzera kuti Ben Tripa akadzingwa kuMaybum]
Pane zvakafanana mukuti nhengo mbiri dzemhuri dzakafa munguva pfupi (nekuda kwechikonzero chimwe chete).
Yegumi nematatu yeNissan 13 - 04/2022/17 pa27:XNUMX
Iri ratova peji ranhasi 🙂
Yegumi nematatu yeNissan 13 - 04/2022/19 pa06:XNUMX
Ini ndinofungidzira kuti Nadav arikureva mhinduro yaAhiezer kuHG pakati peCJ:
Mumwedzi waAdar XNUMX (c) pamubvunzo weDarg uyo mumazuva ekuuraya kuIraq baba vakaurayiwa uyezve mwanakomana akararama rimwe zuva, uyo mhondi dzakabaya nekubaya mapapu, kana akabvumidzwa. kuroora pasina kubviswa, sezvakaita mumhinduro yeGinat Vardim Sephardi yakaunzwa mumabvi aJosef naHarka'a uye muPetah Tikva, iyo inogona kukwidziridzwa.
Pano ndakaona muGinat Vardim responsa uye handina kuwana humwe uchapupu huripo kuti huvandudze, chete kubva kune wechitendero muMatanitin kufa uye kutungamirirwa uye kwete kubva kuTani Prefa, zvinoreva kuti Detrapa haina kudzingwa. Nekudaro, kubva kuToss D. Uye kana ari Toss, zvinoratidzika kuti akanga achifa nemurume akatsanangurwa muSanihedrini neDalarbanan Darbav Hoy semhuka, uye saka Maimonides muPB kubva kumhondi Dahurgo haaurayiwi semhuka, uye neimwe Demprashim GC. Da'af akayerwa uye ari kufa. Uye zvakare zviri pachena kuti dzimba dzeHari Batos Yavmot, uko Demguide iri munzvimbo isina magumo ehupenyu, uye MuB.H. A.H. Mushure mezvose, zvinoratidzwa kubva mumashoko aToss, muenzaniso uyo ari kufa uye anotungamirirwa nemunhu akafanana nemhuka, uye naizvozvo mukupambwa kweQur'an yaDavidi, iyo inowedzerwa kuS. musava nehanya nezvaakabata, nekuti vanofa nevanotungamira vanoda bhibhi uye vanodzingwa kubva mubhaibheri. Kazhinji, zvinoshamisa kuti kana muzukuru-chikuru akatora kutora kuti achada kununurwa, uye pachava nekubvisa pamuviri mumudzimai wehama ane mwanakomana akarasikirwa uye sezvo akaunza mazwi e Toss Reid paShabbat KK zvirokwazvo hainzwi zvachose nekuda kwekupokana kweanopokana, uye haadi kununurwa uye anobvumidzwa kuroora. + Shumirai muBheti Yisakaki, Chiv. A.A. mumhinduro yeBeit Yitzchak Kha'a Shatma G.K.
Asi iyi haisi nyaya yedu. Nepo munhu anogona kufadzwa nenzira yekurapa uye kushaikwa zvachose kwekunongedza kuhukuru hwemanzwiro.
Yegumi nematatu yeNissan 13 - 04/2022/19 pa31:XNUMX
[Nezvekupera kwekutaura kwako pamusoro penzira yekurapa, kutenderera kwePfuma yeUchenjeri kunoratidza kuti mubvunzi kubva kuna Ahiezer ndiRabbi Zvi Pesach Frank uyo akabvunzwa nezvazvo narabhi weSafed pakaitika chiitiko, uye vatove. vakaratidza kuvhunduka, etc.
Kwekanguva kapfupi ndakafunga kuti zvingangofanana nenhau yemazuva ese yemupristi akaponda shamwari yake pagondohwe, uyezve baba vake vanoridza mhere kuti vakurukure nezvekuchekwa kwebanga, pakanyorwa zvinyorwa nemharidzo. asi hazvina kumbofanana nekuti kuuraya vavengi.
Pakati pemhinduro ye halakhic nemharidzo ye eulogy
Yegumi nematatu yeNissan 13 - 04/2022/23 pa57:XNUMX
Muna XNUMX Nisani XNUMX (Rabbi Yosef Caro's)
Kukurukurirana kwese kwemanzwiro kana kusanzwa kwevanopikisa veHalacha pamusana pekugadzirisa kwavo mumhinduro dzavo - hazvina basa. Vachenjeri vakaratidza kufara kwavo nekudaidza zviitiko mumharidzo dzavo munharaunda, iyo yaive nechinangwa chekumutsa manzwiro evateereri. Mumhinduro ye halakhic hurukuro ndeye halakhic 'yakaoma'. Akatonga zvakasiyana uye aida zvakasiyana.
Zvakakosha kucherechedza kuti mashoma emabasa evachenjeri veIsraeri akadhindwa, zvimwe nekuda kwemutengo wekudhinda. Naizvozvo, edza kudhinda sarudzo ine yakakosha innovation. Zvingave zvitsva mu halakhah kana zvitsva mungano. Kuratidza manzwiro emufaro pamusoro penhau dzakanaka uye kusuwa pamusoro perunyerekupe rwakashata - hapana hutsva, munhu wese anozvinzwa, uye hapana chikonzero chekurebesa uchiwedzera mapepa. Kunyangwe mune zvitsva vakadhinda zvishoma zvezvidiki.
Kwaziwai, mukomana mudiki.
Kururamisa uye kutaura
Yegumi nematatu yeNissan 14 - 04/2022/00 pa06:XNUMX
Ndima 1, mutsetse 1
… Zvichienderana nemazwi avo…
Zvinofanira kucherechedzwa kuti dzimwe nguva kupfidza kunorebeswa mumashoko okusuwa, apo munhu anomanikidzwa kutonga nehasha. Apo mutongi anonzwa kuti pasinei nechishuvo chake chikuru haakwanisi kuchengetedza - ipapo dzimwe nguva acharatidzawo kushungurudzika kwake mukutonga kwake.
Semuenzaniso, Rabbi Chaim Kanievsky akaraira chinzvimbo chake mumashoko mashoma, asi Rabbi Menachem Burstein akati pane zviitiko apo Rabbi Kanievsky akati: 'O, o, o. Handikwanise kubvumira'.
T. muNissan 10 - 04/2022/07 pa25:XNUMX
Chimwe chinhu chakafanana chaive apo imwe yakashata yakabvunza Rosh Yeshiva kuti vanobata sei nenyaya yePP pasina iyo ichivakonzera chishuvo chepabonde. Akapindura kuti vadzidzi havasi kutarisana nechokwadi, asi nemaitiro halakhic pamusoro payo.
Zvechokwadi mhinduro yechienzi, nokuti tsananguro iri muMishnah haisi “chiito chakanga chiri”.
Uye zvishoma pane izvozvo, Shlomi Emuni Yisrael, vachitungamirirwa nenyanzvi dziri kudzidza, vari kuungana kuti vabatsire mhuri.
T. muNissan 10 - 04/2022/07 pa27:XNUMX
Nyaya idzi dzakaita se "crash test" yemota, kuyedza kuramba mamiriro akanyanya. Kwete kuti tine chokwadi chekuti mota yese ichapfuura chinhu chakadaro mumugwagwa
T. muNissan 10 - 04/2022/08 pa29:XNUMX
A. Ongororo yako inopotsa zvachose kuseka mukutaura kwangu (uye doc: telenovela! Mukati medhatabhesi inoshamisa yezvinyorwa zvinopihwa nechibvumirano, unogona kunyora zvimwe.).
B. Tose ini nevadzidzi vako vezvidzidzo zvechiremba (avo vasiri muzvinyorwa zvemagazini-sayenzi-zvidemba, uye havadzidzi muDhipatimendi reMacrame neHome Economics. Ndiani akati kuda zvinhu uye chauvinism uye haana kuzvigamuchira?) Nzwisisa zvakanaka maitiro maviri. . Sezvambotaurwa, vamwe vedu tinotonakidzwa nazvo. Chokwadi, vazhinji vedu tinosangana nenyaya dzegemara dzerudzi urwu kekutanga, uye zvinoratidzika kwandiri kuti mudzidzi ane hunyanzvi uye akajairwa anogona kungobatsirwa nekutarisa kwedu kunoshamisa uye kutsva ("mutorwa") chaizvo nekuti ari wekutanga uye asina kujaira. kutarisa kwemaitiro. Kugona kwehutano kutarisa zvinhu patsva kwakakosha kumunhu wese. Usatya, vadzidzi vari nani uye vatongi (kwete transgender) vakabuda mairi.
chetatu. Nekudaro, iyo dayan uye mutongi nyanzvi haifanirwe kuchema nehasha uye kubvisa masumbu ematishu paanenge achidzidza, panzvimbo pekushandisa njere uye kugona kwekufungidzira uye kudzidza. Ndiri kutaura (kutaura) pamusoro petarisiro mbiri uye ine hutano. Hongu, kunyange kuchonya kunoshanda. Kwete musodzi chete.
D. Uye haangavi mupristakadzi somuchengeti weimba yavaeni here? Buda udzidze kuti mitongo yevatongi veDare Repamusorosoro inotaridzika sei, zvichienderana nechinzvimbo chavo, inogadzirisa nyaya dzakakosha dzimwe nguva dzine chekuita nenjodzi dzerudzi rwakasiyana kana rumwe. Nzvero yapamutemo ichavapo mukupinza kwayo kwose, uye pasina kutsausa pakupinza kwekurukurirano, pachava nenguva dzose sumo pfupi kana kuti kutaura kunoperekedza uko kune chokuita noukoshi norutivi rwetsika.
Mwari. Mubvunzo wenzizi dzeropa uye pombi muenzaniso wakanaka wekuseka kwakashata. Inobata gakava rinogara riripo pano, pamusoro pekuzvidza uye kusakosha kumamiriro ezvinhu, mhepo uye dzidzo.
T. muNissan 10 - 04/2022/09 pa31:XNUMX
Mhoro mhuka yake.
A. Handina kumbopotsa. Kusiyana neizvi, ndakanyora nezvekuyemurwa nekunakidzwa nekudhirowa uye ndainzwisisa kuseka kwacho. Uye zvakadaro kubva kune shit ndakanzwisisa kuti pakanga paine toni yekutsoropodza, uye chokwadi ndaiva chokwadi. Matauriro ako apa anonyatsotaura izvi. Gemara yose haibatanidzi sumo yenhetembo mushanduro yeCheshin.
B. Icho chokwadi maonero anogona kubatsirwe kubva, asi kazhinji haana purofiti pane halakhic level. Ndakataura pamusoro peizvi pamagumo echikamu. Ndinotarisa pakutsoropodza kusina basa.
chetatu. Ndakaona kuti kwaive kutarisa, uye ndakagadzirisa izvozvo. Mubvunzo wandanga ndichibata nawo ndewekuti kusavapo kwendege yechipiri maererano nenyaya yekufungidzira kunofanirwa kuve kwekunetsekana here kana kuti kwete.
D. Vatongi veDare Repamusorosoro, kusiyana nevatongi, vane hanya nemutemo kwete halakhah. Mumutemo kune huremu hwakawanda kupfuura mu halakhah (kwete nguva dzose zvakakodzera) kumanzwiro avo. Kupfuura izvozvo, Halachic jurisprudence inobata nezviitiko zvinoshanda, iyo Gemara haidaro. Mumashoko angu ndakamirira kupatsanurwa uku.
Mwari. Ndakataura kutsoropodzwa kwekuseka kwakashata, uye ndikataura pachena kuti izvi handizvo zvandiri kubata nazvo. Mubvunzo wandanga ndichitarisana nawo ndewekuti pane nzvimbo yekutsoropodza tsika here.
Pakupedzisira, kupomerwa kwekusagadzikana uye chauvinism kwakajairwa uye hakuna basa (inowanzo shandiswa zvakanaka kana nharo huru dzapera). Pandinoshuma maonero angu echiitiko ndinotaura nezvechokwadi. Kana chigumisiro chiri chikuru, saka substantivity ingangodaro yakarurama. Nzira yekutarisana nayo iyi haisi kuramba mhedzisiro kana kupa mhosva chinhu, asi kuita nharo nenzira ine mufungo kuti chokwadi hachisi chokwadi. Kana wafunga kudaro, handina kuona mashoko ako munharo dzakadaro. Imwe yematambudziko ehuwandu husina simba (vakadzi munyaya ino zvechokwadi vanhu vasina simba, kwete nguva dzose vane mhosva. Pano ini ndinotoda kugamuchira muchidimbu mutsara unonyangadza "wakapera simba"), ndiko kupikisa tsanangudzo yechokwadi pane kubata nayo. chokwadi. Ndakanyora pamusoro pazvo maererano nedzidzo yevakadzi pakutanga, uye vazhinji vevakadzi vakaiverenga vakagumburwa pane kutora mhedziso dzinodiwa uye kuedza kuvandudza. Muyedzo wekurangarira mamiriro ezvinhu (kana iwe uchifunga kuti zvakanaka, saka kurangarira hakuna kushata mumaziso ako hongu, asi ini handione zvandiri kupomerwa).
T. muNissan 10 - 04/2022/10 pa05:XNUMX
Kutsoropodza kwangu hakusi kweGemara asi kwenyanzvi-Lithuanian nzira iyo inoseka chikumbiro chekutsvaga kaviri. Muenzaniso kubva kuvatongi haufaniri kuenda kuCheshin inozivikanwa zvikuru yakanyanyisa nhetembo, ine mienzaniso yakawanda yakabudirira uye yakakomba, sezvamunoziva ini ndakabatikana mazuva ano nedzidziso dzemuJudha anodiwa mushure mokunge vapedza kudzidza pamusoro peDare Repamusorosoro uye uko zvinhu zvakakodzera kucherechedzwa.
Ndakakupomera mhosva ine chekuita nesitaera kwete zvemukati, ndiko kuti, zvinoshamisa sei - zvakare, kuseka. Chero ani anoomerera pakuseka nhengo dzekambani yake zvakare uye zvakare, chaizvo maari anofanira kufungidzirwa kuti nharo dzake hadzina kubudirira. Kana, kududzira mutauro wehutsvene hwako: "Iyo iri pamusoro apa grin inowanzoitika uye haina basa (inowanzo shandiswa zvakanaka kana nharo huru dzinopera)."
Ini ndinonzwisisa hangu kuti mukuita ndinosangana nerudzi urwu rwemhinduro kubva kuvadzidzi vazhinji, uye izvi zvinoruramisa dzidziso dzakadai uye dzakadai, ndinongopikisa maitiro ekuzvidza (kusiyana nevadzidzi vePhD mune zvevakadzi nehupfumi hwepamba, avo vakakudziridza hunhu hwehunhu, kunyanya kugadzira nzira yezvinyorwa zvejenari). Kusaenzi dzekuzvidemba "), ndiko kuti, takadzoka zvakare, uye panguva ino ndichataura mutauro wangu unoyera," kune gakava rinogara riripo pano, pamusoro pekuzvidza uye kusabatanidzwa kwe kukosha kune mamiriro, mamiriro uye dzidzo ”.
T. muNissan 10 - 04/2022/14 pa17:XNUMX
Asi iyo yakapetwa kaviri inoshaikwa muGemara pachayo. Ichi hachisi kugadzirwa kweLithuanians. Nyanzvi yeLithuanian inongoomerera kune zviripo, uye zvaanotaura ndezvekuti chirevo chechipiri chiri chepamutemo zvachose asi kuti haisi nyaya yekudzidza nyaya yacho, uye zvechokwadi hairevi nenzira ipi zvayo kuratidza unhu hwakanaka kana kukanganisa.
Handina kunzwisisa zvaunotaura pamusoro pemaitiro. Hapana kusekerera apa. Aya ndiwo akajairwa nharo dzemapenzi / hunyanzvi hwedhipatimendi revakadzi. Izvi ndizvo zvavanoita dzinenge nguva dzese. Zvandakataura pamusoro pevakadzi vose, kunyange avo vasingadzidzi nezvevakadzi (vazhinji vavo seni), ndakataura kuti nharo dzakadaro dzakafanana nevakadzi, uye ndinofunga kuti izvi ndizvo zvinhu zvinobuda kubva pane zvakaitika kwandiri. Hapana kukakavara pano asi kuona kwechokwadi.
10 yeNissan 04 - 2022/15/47 paXNUMX:XNUMX
Chokwadi, sezvandakanyorera Sarah, hapana chikanganiso chetsika pano, ndakaona paFacebook yeimwe nyanzvi yaakataura nezvemienzaniso yakafanana iyo Tractate Yevamot inounza zvakare uye zvakare nezvaRuben nekubatwa chibharo kwake, kuti zvingave zvakakosha. kuchengetedza kukudzwa kwaRubheni naShimoni uye kupa mienzaniso yaAridhata naDhefoni uye vamwe vanakomana gumi vaHamani. (Kune rimwe divi pane mamiriro ezvinhu ekuti zvakanzi nekuda kwePurimu uye aisarevesa zvachose) Kupomera vadzidzi vevakadzi kuti havareve chaizvo asi chinangwa chavo ndechekuburitsa zvinyorwa, uku kusvibisa uye kwete a kuona chokwadi.
T. muNissan 10 - 04/2022/10 pa23:XNUMX
Yakapinza sekare. kuita zvakanaka.
Dzimwe pfungwa dzisina kugadziriswa:
A. Kuseka kwemhuka yake zvechokwadi akapotsa. (Ndichareurura kuti ndakatadzawo pakuverenga kwekutanga)
B. Ndinofunga izvo zvinobatsira mwana muHyder chokwadi chekuti anogadzira mukuumbwa kweGemara. Kana shamwari yake yemubhenji ikamubvunza kuti chii chaizvo chabva nepi anobva atanga kupindwa nechando nekutsvuka.
chetatu. Kana mudzimai wangu akandiudza kuti akaona mbeva yakapwanyika mumugwagwa, isina kunyatsopwanyika kwegirazi, hazvingaite kuti ndinzwe manyukunyuku. Ndikamuudza – ari kurutsa. Vamwe vanhu vanozvitora ivo pachavo chokwadi chavanoverenga vozosangana nacho neimwe nzira uye vamwe havaiti. Mumwe anogona kuverenga Harry Potter obva aona bhaisikopo oti - ini handina kumbozvifunga saizvozvo! Uye mumwe munhu haana kundifungira. Ini ndinotenda kuti dzidziso dziri kuBar Ilan dzinonzwisisa kutarisisa kaviri, asi havakwanise kufungidzira ivo pachavo mamiriro acho.
D. Sekureva chaiko, ndinofunga kuti kana munhu akasangana nemamiriro ezvinhu chaiwo aari kudzidza nezvawo, zvichanyanya kumuomera kuti abviswe. Iye achabva azvipenda pachake mamiriro acho ezvinhu sezvaanotarisana nawo. Chimwe chikonzero nei zviri nyore kuti mwana muHyderabad adzidze nezvekuuya nenzira isiri iyo uye zvichingodaro. Hazvisi zvenyika yake zvakanyanya.
Mwari. Zvinogoneka zvakare kuti chishuwo chekuvandudza, chiripo mune vamwe vevadzidzi, uye kuronga kubva munyika yavo kuenda kunyika yeTalmudic uye kusauya zvachose sevagamuchiri, kunoita kuti kudzidza kuve nemanzwiro.
uye. Pasina kupokana, kuparadzaniswa kwemanzwiro kunobatsira mukunzwisisa nyaya zvakajeka. Unogona kurasikirwa nechimwe chinhu kana ukasabatanidza manzwiro kwachiri gare gare. Hunhu hwandinofanira kubatanidza kuti ndinzwisise nyaya, pamwe manzwiro ane nzvimbo ipapo kumwe.
(Ini handina kunzwisisa kuti dambudziko reropa rinenge riri rei. Musaendesa ropa nemumachubhu kuvarwere? Hazviite here kutamisa ropa risina utachiona pakati pemawadhi nemuchubhu? Kana kuti kuendesa ropa kubva pamhuka dzakaurayiwa muchiiswa muchubhu kuti musanganise? wesuweji?Vampire vanofanira kubatsirwa kufambisa ropa kubva panzvimbo yaanourayira vanhu kuenda kukicheni nepombi, ungavakisa sei, etc. Asi iwoyo mubvunzo usina mhosva.
T. muNissan 10 - 04/2022/14 pa21:XNUMX
A. Pamwe wakazvipotsa. Asi kwete neni. Wese anotsoropodza ari panzvimbo yake anomira zvisinei nemubvunzo wekuseka.
B. Chokwadi, zvakafanana nekubvunza R. Chaim kuti pani chii.
chetatu. izvi zvakanaka. Ini handina dambudziko neavo vanoratidza mamiriro mundangariro dzavo, uye nevaya vanokatyamadzwa nazvo. Handingofungi kuti kuvhunduka uku kunoratidza hunhu hwemweya, kana kuti kusavapo kwayo kunoratidza kukanganisa.
D. Ona c. Izvi zvinogona kunge zvine chekuita nekutaura kwangu kwekuzengurira kumagumo kwechikamu pamusoro pekukanganisa muchidzidzo chacho.
Mwari. Zvehutano. Pane chinodiwa here apa? Ini handisi kubata nekuongororwa kwevakadzi kana vadzidzi, asi nezvakakosha. Kwete kwainobva asi kana yakakosha uye yakakosha.
uye. Ndakatsanangura kwaaive.
Handina kunzwisisa kuti dambudziko nderei pamubvunzo wevampire. Handione kana dambudziko nazvo.
T. muNissan 10 - 04/2022/14 pa10:XNUMX
Mushure mezvose, Gemara yakanyorwa muunyanzvi hwekupfupisa kwakasimba. (Ichi ndicho chimwe chezvishamiso zviripo, kwandiri, muverengi akashamisika).
Nyika-nyika dzinogona kupetwa mumutsara wemazwi matatu, ndima inogona kunge iine mazana emakore emapupu, inokodzera sei kuenzanisa nePSD yeMukuru? Izvo zviri mumutsara mupfupi uye wakapinza weGemara ungadai wakateurirwa ipapo pamakumi, kana asiri mazana emapeji.
Ini handifungire mhizha dzemashoko ekupedzisira eTalmudic peji vaive vasina hanya kupfuura chero mukadzi uye pasina mutongi mukuru.
Uye isu tinofanira kuyeuka kuti zvese zvakatanga kare, uyezve kushomeka kwenzira dzekunyora, kukosha kwekukopa nekuchengetedza zvizvarwa nezvizvarwa.
Zvimwe kupa muenzaniso? Chii uye sei chaungaisa muSugia Danan?
10 yeNissan 04 - 2022/15/39 paXNUMX:XNUMX
Ndinobvumirana newe, uye hazviitike kwandiri kuti ndinyorezve Gemara. Kuenzanisa kutonga kwemazuva ano kune chokuita nekutonga kwemazuva ano. Uye zvichida nenzira iyo rabhi anodzidzisa nayo vadzidzi vake. Ndinofungidzira kana uyu ari rabhi waanodzidzisa, achadzidzisa nyaya iyi kuvadzidzi vake, asi pachava nechiratidzo chiduku chekufananidzira. Wink, taura nezvimwe zvakadaro. Nyaya yerufu muavalanche haina kukosha kwetsika zvachose, kungoita njodzi inogona kuitika kunyange nhasi muUkraine, une chirevo chinonakidza, nezvemuromo. Iwe unokarakadza here kuti pakanga pane zvimwe zviratidzo zvisina kuchengetwa muzvinyorwa zvipfupi zvekunyora nokuda kwenguva yemberi? Handizivi uye handifungi kuti pane nzira yekuziva nayo. Zvichida zvakakosha kupikisa vane hunyanzvi pano kana kumwe kuShas kune maitiro e "emotional" zvishoma kune chimwe chinhu. Semuenzaniso, papeji ranhasi pane mutsara unofadza unowanikwa kakawanda - tiri kubata nevakaipa here? Ichi chirevo chechokwadi-chechokwadi, asi chine mutinhimira wekuvhiringidzika kunofadza.
Tora nguva uye nguva yekunamatira (yeSarah nemhuka dzake)
10 yeNissan 04 - 2022/16/03 paXNUMX:XNUMX
Kwaari naSarah - mhoro,
VaTannaim nevaAmoraim vaive nehalakhah - vaivewo nengano uye vanyori veminamato. Mumashoko avo muHalacha - iva nechokwadi chekugadzira nyaya-ye-chokwadi mazwi. Nepo nyika yavo yemanzwiro - yakaratidzwa mumashoko avo mungano uye minamato yavakavamba (mimwe minamato yakanaka yemunhu yaiti Tannaim naAmoraim 'Batar Tzlotya' vakaungana pamwechete muTractaate Brachot, uye mizhinji yacho yakaverengerwa mu'Siddur') . Tora nguva zvakasiyana uye nguva yemunamato zvakasiyana.
Kuremekedza, Hillel Feiner-Gloskinus
Uye kwete setsika yevadzidzi veTorah nhasi yekubatanidza kudzidza nemanzwiro, izvo zvichanzi: 'Uyo anodzidzisa mwanasikana wake Tora - anodzidzisa minamato 🙂
'Uye dzokera kumoyo wako' - kuisa mukati mukati memukati mekudzidza mumoyo mako
Gumi nembiri yeNissan 12 - 04/2022/16 pa51:XNUMX
Kunyangwe chidzidzo chinofanira kunge chiri 'huropi hunotonga pamwoyo'. Kudzidza Tora kunoda kuteerera kuTorah iyo isingawanzoenderana neinorerekera yemoyo - shure kwezvose, mushure mekujekeswa kwepfungwa - tinofanira kuendesa zvinhu kumoyo muchishuwo chekugadzira kuzivikanwa kwemunhu nevakadzidza.
Ona chinyorwa chaRebbetzin Or Makhlouf (Ramit muMidreshet Migdal-Anaz), mufaira "Nemhaka yokuti vane mhuka," Migdal Iz Tisha: 31, p. 0 zvichienda mberi. Ikoko anotaura, pakati pezvimwe zvinhu, marwadzo aGrid Soloveitchikf, wechidiki weOrthodox akabudirira mundima yekuedza kwenjere ... akawana ruzivo rwemafungiro uye mitongo. Anofarira zvidzidzo zvakanaka uye kunyura mune imwe nyaya yakaoma. Asi moyo hausati watora chikamu muchiito ichi… Halacha haizove chokwadi chepfungwa kwaari. Kuzivana chaiko neShechina hakuna… '209 Words of View, p. XNUMX). Tarisa kuchinyorwa chakareba
Ngazvizivikanwe kuti Torah inoda kushanda kwemoyo pamberi uye shure kwayo. Pamberi pacho - chishuwo chekubatana naMwari kuburikidza nehuchenjeri hwake uye chido muTorah uye munamato kuti isu tichava nekodzero yekunangisa kuchokwadi; Uchiteverwa nomunyengetero wokuti tichava neropafadzo yokushandisa muupenyu zvinhu zvinokosha zvatakadzidza nezvazvo.
Gumi nembiri yeNissan 12 - 04/2022/16 pa56:XNUMX
Ndima 1, mutsetse wechina
Kuzivikanwa kwako pachako nemudzidzi…
‘Munondo pakati pezvidya zvake nehero yakashama pasi pake’ zvinoda chisarudzo chinofungwa uye chakadzikama
T. muNissan 10 - 04/2022/14 pa57:XNUMX
Mune SD XNUMX muNissan P.B.
Muyananisi mukuita kwake sarudzo anofanira kuita kubva mudutu remanyawi emativi maviri. Ane nhamo kune rumwe rutivi uye ane nhamo kumweya wake kana akakanganisa uye akasiya mukadzi wemunhu, uye kune rumwe rutivi ane nhamo kwaari uye ane nhamo kwaari kana akamisa mukadzi anogona kubvumirwa. Chirevo chinotonga kumunhu anotsika nzira nhete pamucheto wegomba rakadzika-dzika, kuti chero kutsauka zvishomanana kurudyi kana kuruboshwe - kungamusvibisa mugomba rakadzika-dzika.
Uye muyananisi anofanira kuva mufunganyo yakapetwa kaviri, nokuti kusava nehanya kuchamutungamirira kumutongi wenhema kunze kwokusava nehanya, uye muyananisi anotya Mwari anofanira kuva ane hanya, achiitira hanya kuti haasati achizokundikana ndokubvumira chinorambidzwa, uye ane hanya kuti iye haasati achizorambidza. zvinotenderwa. Kufunganya kwake uye kunetseka kuti kururamisira kuchaburitswa - ndicho chikonzero chekushingairira kwake kutsvaga chokwadi chaicho.
Asi mhirizhonga chaiyo yakamutadzisa kujekesa halakhah - iyo pachayo inoda kuti kujekeswa pachayo kuitwe nenzira yakatariswa uye yakadzikama, nekuti kujekeswa kubva mukushushikana uye kurasikirwa kwepfungwa - kwaisagona kukurira chokwadi. Nokudaro, mutongi anofanira kunge akadzikama panguva yekubvunzurudza, uye gadzirira kufunga nezvese zvingasarudzwa, kunyange zvinorwadza zvikuru. Nokudaro, kana mubvunzo unouya - mutongi anofanira kuisa dutu remanzwiro parutivi uye kufunga zvakadzikama.
Mune izvi murume weHalakhah akaita semurwi ari kupfurwa, asingafanire kuita nekukurumidza. Anofanira kumbomira kwekanguva, ovanda, otarisa paari kupfurwa, obva atarisa uye opfura zvakarurama pane chaari kupfurwa. Kukanganisa kurova muvengi kune njodzi kune anopfura, sezvo zvichitengesa muvengi nzvimbo yake yekupotera.
Uye ndizvo zvakaita mamiriro emuponesi anosvika pachiitiko chinotyisa, chinokanganisa uye chinotyisa, uyo anofanira kukurumidza kuverenga mamiriro acho ezvinhu, uye kuisa zvakakosha. Kurumidza kugadzirisa izvo zvine ngozi nekukasika, gadzirisa zviri kukurumidza, uye siya kusvika padanho rekupedzisira izvo zvisingakurumidze kukurumidza. Kutarisirwa mamiriro ekuongorora - ndiyo hwaro hwekurapa kwakakodzera.
Chishuvo chakasimba chekukunda muhondo kana kuchengetedza vakakuvara - ndiwo mafuta akakurudzira murwi kana mubati kuti azvipire kuhondo yekurwisa kana mauto ekununura, asi sarudzo yei uye sei kuita mumamiriro e "kusashanda" - inofanira kuitwa. nokutonga kwakadzikama uye kwakadzikama.
Zvechokwadi hazvibviri kufunga zvakadzikama paunosangana nechiitiko chisingatarisirwi, kuti nekuda kwekunetseka munhu anokanganwa 'dzidziso' yose. Kuti izvi zviitike, halakhic jurists, varwi uye vashandi vekununura vanobata 'kosi yekudzidzira' inovavarira kutarisira zvese zvinogoneka 'blatam', kugadzira pachine nguva maitiro ekuita mamiriro akafanana, uye varapi havaite mumamiriro ese ezvinhu. Zvino kana 'kusashanda' kwasvika - chirongwa chekuita chinobva chabuda uye unogona kuita zvakarongeka pasina kuita makuhwa. Zvirongwa zvakafungwa zvikagadziriswa pachine nguva.
Zviitiko zveTrakiti Yavmot. Njodzi dzekudengenyeka kwenyika uye kuparara kweimba, zvirwere uye denda, kunyangarika kwevanhu vari kufamba nzendo dzekutengeserana uye ngarava dzinonyura mugungwa, hondo uye mazita uye zvirongwa - zvaive zvachose mamiriro ezvinhu munyika umo vachenjeri vaigara, kunyanya mumazuva echimurenga cheRoma. Holocaust uye kumukira kweBar-Kochba.
Bhuku rekutungamira rekurapa kunoshanda kwenjodzi dzinoshungurudza mamiriro ezvinhu rinofanirwa kuve rakakodzera uye rakapfupika, uye zvakajeka uye nekupfupikisa kubatanidza ese prototypes ezvinoitika uye kuvapa chirongwa chekurapa, saka Yavmot mask inogadzirwa nenzira ipfupi uye yakaoma, senge bhuku redzidziso yekurwisa kana rubatsiro rwekutanga richagadzirwa .
Kwaziwai, Hillel Feiner Gloskinus
MuMishnah neTalmud, mashoko okuti 'telegraphic' anoedza kuataura nomuromo. Kuti vakwanise kuziva nemusoro, vanofanirwa kuumbwa nenzira yakajeka uye inobata. Kutaura kwakadzama kwenguva refu kana kuputika mupfungwa hazvibatsiri nemusoro. Talmud ndeyekudzidza zvakadzama, uye munyengetero ndewekudururwa kwemweya. A 'sub' inofanira kuva yakapfupika uye yakapfupika
'Willen akatumidza Jakobho usiku ihwohwo' - dutu remanzwiro rinoda chiito chakadzikama
T. muNissan 10 - 04/2022/15 pa15:XNUMX
Uye saka Yaakov Avinu, uyo anonamata nekufunganya nekufunganya, 'Ndapota ndiponesei, pakarepo, hama yangu, pakarepo ita… kuti arege kuuya kuzogadzirira mai vevanakomana' - anoenderera mberi achiita zvakadzikama. Haabva atanga kutiza. Asi, iye nehondo yake vanondovata (uye ndiani angavata mumamiriro ezvinhu akashata kudai?) Uye mukai manyoro kuti varwe kuti vasangane nehondo yaEsau.
Kunyange naDhavhidhi akatiza mwanakomana wake Abhusaromu, paakanga aputsika uye akachema uye akanyengeterera ruponeso rwake kubva kune vazhinji vakanga vamumukira, vanhu vose vachirwisa vashomanana vakatendeka vakanga vasara naye. Anotaura funganyo yake yose mumunyengetero, uye munyengetero wake unomupa simba rokuita chisarudzo chaichoicho. Anoedza nzira yokureverera kupfurikidza nokutumira pfungwa dzechinyakare kuti dziputse zano raAhitoferi, uye pashure pomunyengetero nokurevererwa, iye ane chivimbo mazviri, uye anokwanisa mumugariro wake unotyisa kuramba ‘norugare pamwe chete ndichavata pasi ndigobatwa nehope nokuti iwe uri murombo. Jehovha oga uye zvirokwazvo mugari wemo.
Kuzvidya mwoyo kunoratidzwa mumunyengetero, uye mauri munhu anodzidziswa nechivimbo kuti aite nokungwara.
Nemwoyo wose, The PG
10 yeNissan 04 - 2022/16/59 paXNUMX:XNUMX
Bvumirana nezvose zvaunotaura.
Uye kunyange mukati me halakhah kakawanda manzwiro akawanda anochengetwa. Uye zvechokwadi kusanganiswa kwengano uye halakhah kunobvumira izvi kusvika pamwero wakati,
Senge, semuenzaniso (hupenyu hwake) inobata moyo, kuravira kwangu: (Ndinoshamisika kana kune mutongi muDare Repamusorosoro akazvibvumira kudurura zvakanyanya)
10 yeNissan 04 - 2022/17/14 paXNUMX:XNUMX
10 yeNissan 04 - 2022/17/45 paXNUMX:XNUMX
Quote hongu, asi kwete chokwadi kuti vangadai vakatanga kudai.
Nenzira, iwe unogona kuona kuti kutonga kurefu kwenguva yakareba sei uye kunetesa, nekufamba kwemakore, kana ruoko rukava chiedza pane keyboard, uye zvitubu zvose zviripo, uye hapasisina chikonzero chekuraira kumutori wenhau.
'Anodzidzisa kuti haana kurara' - pasinei nekufarira
Gumi nembiri yeNissan 13 - 04/2022/00 pa04:XNUMX
BSD XNUMX muNissan PB
Pamusoro pekukosha kwekudzikama paunenge uchiita, Hasidim akajekesa chinyorwa chemuchenjeri 'Hongu, Aroni akazviita - anodzidzisa kuti haana kurara', kuti hazvinzwisiswe kuti chii chinonzi 'Salka Da'ata' iyo mutsvene Aaron Gd anorara kubva kuna Mwari. mirairo? Uye vateveri vakatsanangura kuti kunyangwe Aroni aive akazara nechido paakaenda kunobatidza mwenje uye pakanga paine nzvimbo yekunzwa kuti nekuda kwechido aizokanganisa pane zvese. KML uyo, kunyangwe akasungirirwa, anongwarira kuita basa rake nemazvo.
10 yeNissan 04 - 2022/17/22 paXNUMX:XNUMX
Kana zviri zvekushandisa (izvo zvandisingagamuchiriwo), mune shinda yawakavhura muIDF, pamwe vanhu veSura mufananidzo wakanyanyisa wekureva uku mune imwe nyaya isingafungidzirwe. https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=2827720&forum_id=1364
10 yeNissan 04 - 2022/19/06 paXNUMX:XNUMX
Chokwadi, ikoko naRami Bar kudzokororwa kwezvinhu inhamo uye kusetsa munzvimbo imwechete. Asi ikoko kunogona kunzi, sezvo zvinhu zvakanga zvatoitwa, vakamukumbira nokuda kwamabasa ake. Uye sezviri pachena akanga asingadi kutsamira patafura yavamwe
10 yeNissan 04 - 2022/22/20 paXNUMX:XNUMX
Pane nzvimbo ye "kutonga manzwiro" maererano neGemara apo mapato maviri anouya kuzokakavadzana pamberi peDayanim uye hapana chisarudzo chakajeka, chinonzi "Shuda Dadayin".
11 yeNissan 04 - 2022/00/07 paXNUMX:XNUMX
Shuda Dadaini inotonga mune chaiyo nyaya uye kwete mune ese mamiriro kana pasina sarudzo. Nokuda kweizvi kune mitemo yekukwana. Asi kunyange Shuda haisi manzwiro asi intuition. Musarwisana.
10 yeNissan 04 - 2022/23/16 paXNUMX:XNUMX
Mukuona kwangu, ichokwadi: mumwe munhu akatanga hurukuro yepaIndaneti pamubvunzo "Kana iwe ukaona mangwana kuti chiKristu ndechechokwadi - iwe ungashandura mararamiro ako zvakakodzera". Dzimwe dzemhinduro dzehupenzi dzaive "hazvizoitika saka hapana chekubvunza". Vanhu vane nguva yakaoma kunzwisisa chikamu chemubvunzo wekufungidzira. Ndakaedza kuvatsanangurira kuti ivowo pamwe vaisazombofanira kukanda munhu akafuta kwazvo panjanji kuti chitima chisamhanye pamusoro pevanhu vashanu vanomanikidzwa, uye zvakadaro uyu mubvunzo unokosha mumakosi ehuzivi hwetsika; Asi hazvina kushanda...
Zvino mumwe munhu akandipikisa kuti mubvunzo wekufungidzira wakanaka, asi pane zvinhu zvinokatyamadza mupfungwa uye saka hazvina kunaka kukurukura nezvazvo zvine hungwaru (kusiyana, toti, kutsikwa-tsikwa kwemunhu akafuta kwazvo nechitima chinova. pamwe hazvishamisi zvachose). Munyori wacho akanga ari R.M. ari muchikoro chesekondari yeshiva, uye handisati ndanyatsojeka kwandiri zvaari kuita panyaya dzakafanana nedzawataura pano… Zvisinei, pashure penharo pfupi akandibvunza kana ndaifunga kuti zvakanga zviri pamutemo kuti andibvunze “ ko ukazoziva mangwana mai vako vanouraya unoita sei" . Hongu handina kunzwisisa kuti dambudziko raiva rei pazviri, ndakatoenda kunoudza amai vangu avo vaisanzwisisawo kuti dambudziko raiva rei pamubvunzo uyu... ko nenharo iye ainyatsobvunza mubvunzo, saka handina kunyatsonzwisisa kuti aiedza kujekesa pfungwa ipi.
Pazasi - kana zvakaoma kuti vanhu vatarise zviri mukati (nenjere!) Vanomhanya kumucheto uye vanoedza kuratidza 'matambudziko' ezvizoro sechikonzero nei pakutanga zvisina kukodzera' kuita izvi (zvino. chasara kudzidza chete Nyaya inoyevedza kwazvo).
11 yeNissan 04 - 2022/00/11 paXNUMX:XNUMX
zvirokwazvo. Ini ndinongotaura kuti pane nzvimbo yekutaura kwake nezvechiKristu nenzira inotevera: pamwe mumaonero ake kana chiKristu chine musoro saka chaive chisiri chiKristu chatinoziva. Saka hapana nzvimbo yemubvunzo wekuti ndingadai ndakaita sei dai ndakawana kuti chiKristu chakarurama. Nenzira yakafanana, hapana nzvimbo kumubvunzo weizvo Maimonides angadai akataura pamusoro pemigariro ipi neipi muzuva redu. Kudai akanga ari mupenyu nhasi angadai asiri Maimonides.
10 yeNissan 04 - 2022/23/29 paXNUMX:XNUMX
Mhoro Rabhi Michi.
Zvakaoma kupokana nezvauri kuda, zvechokwadi mu "common sense" zviri pachena kuti chakachena uye chakarurama ndechekushanda net halakhic rational analysis. Asi hazvigoneke kufuratira chokwadi chekuti nguva zhinji nyaya dzeShas dzenyanzvi dzinoputirwa munyaya dzinovapa kuverenga kwemunhu kana hunhu hwepfungwa.
Ndichapa mienzaniso miviri (yekutanga yakati nyoro): Mushure mekunge Tractate Gittin akurukura nezvematambudziko akasiyana-siyana ekufungidzira uye echokwadi, anonetsekana kupedza nemharidzo yeruvengo nekurambana. Uye zvinorwadza sei Mwari nokuda kwechatanuro pachayo. Sei zvakakosha kuti Gemara ipedze Trakita nenzira iyi? Pano hapasi pakuverenga kwekutungamira here?
MuGemara muKiddushin mune ngano yakaisvonaka pamusoro paRabhi Asi naamai vake. Hunokosha kwazvo zvokuti hwakapinda muhukwana hwayo mitemo yaMiriam, Chitsauko XNUMX, uye Maimonides. Pakupera kwenyaya kwakanyorwa kuti Rabhi Asi akati "Handizivi Nafaki" Vazhinji vatauri vakatsanangura mutsara uyu kuburikidza nemagirazi e halakhic. Rabbi Asi anoti angadai asina kusiya Nyika yeIsrael nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zve halakhic (kusachena kwemarudzi nokuti iye muprista uye zvimwe zvikonzero). Maimonides akanyora muHalacha kuti zvamazvirokwazvo kana vabereki vake vakanyengedzwa aigona kunyaradza ndokuraira mumwe munhu kuvatarisira. Money Mishnah inosimbisa Maimonides uye inotaura kuti kunyange zvazvo isina kunyorwa zvakajeka panhau yacho sezvingabvira yaiwanzoita Rabhi Asi. Rabhi anotsamwira Maimonides uye anotaura kuti iyi haisiriyo nzira uye kuti munhu anogona sei kusiya vabereki vake kune mumwe munhu kuti avatarisire. (Zvinogona kupokana kuti uku kufunga kwe halakhic asi zvinongoreva kuti haagone kushivirira pfungwa yehutsika) Hapana nyaya = ini handingasiye Bhabhironi. Uye inoreva kurwisa kwaRab'ad pana Maimonides.
Chokwadi ndechekuti zvinozoitika kuti chokwadi halakhic kururamisira naMaimonides uye zvine chekuita nemari asi maziso edu anoona kuti nyanzvi nemutongi vakaverenga ngano iyi mukuverenga kwerudo rwetsika.
Ndinofungidzira kuti dai ndaive nebhuku pamberi pangu nemudzidzi wevakachenjera, Rabbi Yehuda Brandes, "Ngano muChaizvo," ndingadai ndakapa mimwe mienzaniso mishoma uye pamwe yakabudirira.
PS: Kumirira uye kumirira koramu yekutendeuka gakava (yakawanda sei iwe yaunogona kuramba?)
11 yeNissan 04 - 2022/00/13 paXNUMX:XNUMX
Chokwadi kune mienzaniso mishoma. Ona semuenzaniso muchikamu 214 pamadota ake nekuda kwemiseve yake. Asi handizvo zvandiri kutaura nezvazvo pano. Vaida kundidzidzisa kuti kurambana chinhu chakaipa. Izvi zvinei nechekuita nekutonga pa halakhah munyaya idzi? Zvine chekuita nehutungamiriri hwese hunopikisa halakhah kuti kuedza kunofanirwa kuitwa kudzivirira kurambana.
11 yeNissan 04 - 2022/09/36 paXNUMX:XNUMX
“Mutongi gava anofanira kufunga zvakadzikama pamusoro penyaya iri pamberi pake. Zvinotaurwa ne halakhah hazvinei nechokuita nezvinorehwa nemanzwiro (uye mumaonero angu kwete kunyange zvinotaurwa nehunhu), uye zvakanaka kuti zvinoita. Murevereri anofanira kucheka mutemo nekudzikama, uye nekudaro ave nekodzero yekutungamira chokwadi cheTorah. "So far mashoko ako.
Ndakapa muenzaniso kubva munyaya yaRabhi Asi naamai vake vakatongerwa Haracha. Ndakazopedzisira ndataura kuti Rabhi naRashash vakanga vasingabvumirani navo nenzira isina kururama, pamunhu kana kuti tsika.
11 yeNissan 04 - 2022/10/03 paXNUMX:XNUMX
A worse partial quote akazara kutaura zvachose. Mushure mezvose, ndakanyora kuti pane nzvimbo yekuunza kufunga kwakadaro muchikamu B, mushure mekunge tapedza kukurukura nezvekutanga halakhic sarudzo. Kana mutemo usina kutemwa asi sarudzo dzakawanda dzichiripo, nzira yekusarudza pakati pavo inogonawo kuva netsika (uye zvichida manzwiro sechiratidzo).
11 muNissan 04 - 2022/19/59 naXNUMX:XNUMX
1. Pamwe ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei Gemara isiri yevakadzi uye ivo vasingakodzeri kukurukura nezvayo? (Inobvunza haigadzirwe)
2. Chokwadi ndechekuti makore pandinoverenga "Two Bibles and One Translation" ndinosangana nenyaya kubva muTorah idzo kwandiri uye nekuda kwechizvarwa chedu chechikadzi chinoshaya manzwiro (sezviri pachena) handina kumbobvira ndagovera zvakandipoteredza nekuti. Ini handina mazwi ekutaura manzwiro angu kunyanya isu takabatikana nemanzwiro, ini iye zvino handichayeuki mienzaniso yakawanda kunze kweumwe apo Eriezeri akauya munhaurirano kuti atore Rebeka (panguva iyo nyika yakanga isati yava mhuri imwe chete. inogona kunge yakave kuparadzana kwenyika yose kubva kumhuri yake iyo inowedzera pano kumanzwiro) uye baba vake Bhetueri nehanzvadzi yake Ben vakaedza kunonoka uye ipapo Musikana (kwete kukanganwa kuti akanga ane makore matatu okuberekwa ndeimwe pfungwa inobatsira manzwiro kune mutambo wose) Vachenjeri vanobvunza uye baba vake varipi mutemberi? Vachenjeri vanopindura kuti akafa (akadya ndiro ine muchetura yaakagadzirira Eriezeri nengirozi yakatsiva mahwendefa sokunge ndiri zviyeuchidzo zvemvura) uye zvinobva zvangotaurwa kuti vakabvunza ndokutuma Rebecca munzira yake, uye heino mwanakomana. anobvunza fungidzira mamiriro ezvinhu nhasi dambudziko rakadaro Dom Eriezeri angangoita kwenguva iyo nyuchi zvirongwa zvake uye aizonzwa kunyara zvishoma nekirasi yake yese uye ari kumba iko zvino akatarisana nenjodzi yemhuri (zvichida kuedza kupeta midziyo chinyararire uye ibva panzvimbo yaauya panguva yakaoma kudai kana kuti neimwe nzira yekusagadzikana Chinangwa chekuuya nekubatsira nemuviri wese nemweya wake kuronga mariro nekuvaka tende nekuunza macheya evanochema nezvimwewo) asi mukuita mu Torah nyika semazuva ose inoenderera mberi kunze kwekuti zvirongwa zvinoenderera mberi sezvakarongwa Mu autism, rabhi pano ane mushonga kubva ku "Dauriyta" kuti ave nekambani yakanaka.Panyaya yaJosefa nomukoma wake, hongu, majaya, iyi ndiyo mamiriro ezvinhu (uku kuvhunduka kwaEsau hakuna kuitika maererano navachenjeri. Yakaripwa naModhekai muJudha zviuru zvamakore gare gare, sezvinozivikanwa zvikuru). Kupfuura bhatani rehembe yake, pane imwe nguva vatongi vakaedza kukurudzira mumwe kuti arambe mukadzi wake achimuudza kuti zvakanyorwa kuti artari inodonhedza misodzi akavapindura kwete zvakaipa nanhasi ndinoyeredza misodzi zvaisarwadza kubuda misodzi. zvino zvakare, Zvababa vakafanoona mutemberi vachibaya mwanakomana wavo uye ipapo baba vakapinda mukufungidzira kwegirama vakaenda uye vakaraira kuti vabudise mwanakomana wavo panze vachipururudza kuti abatsirwe nekutya kusachena (panzvimbo yekupotsa kurova) uye Gemara. inokurukura ipapo baba ava, vangave vane ruremekedzo rwakanyanya kana "autism" maererano nemhondi
3. Muchirevo chemashoko aRabhi “zvakafanana nokubvunza R. Chaim kuti pani chii” muenzaniso warabhi haubudiriri uye ndichajekesa izvi nenyaya.Zvichida zvemipiro nezvechegumi R. Chaim akamubvunza kuti chii chinonzi avocado. ? R. Avraham akabayiwa mwoyo ndokuti unonzwisisa zvinoreva zvakawanda here? Kuti muvaBabironi vese neveJerusarema neMidrashim neTosefot neZohari, nezvimwewo, izwi rekuti avocado haripo.
Masach Pan atotaurwa kare muTorah kakawanda pano kuti atende rabhi nezve "chinyorwa chisina kunyorwa narabhi" zvichitevera kufa kwarabhi wedu mukuchengeta mutongo sezvaanorairwa kuti ataure chimwe chinhu chinonzwika Chaitsoropodza) uye dziva iro rabhi rinofarira kubaya mombe dzinoyera kubva kupi zvako izvozvi mumakore makumi matatu kana richidziya rinowanzoputika denga reGomo reTemberi kupfuura kubaiwa kwemombe inoera, ndakambobvunza rabhi wedu munharaunda ine ruzivo kuchera kana ndakabvumirwa kutaura Chokwadi kurumbidza (uye ndinowedzera kuti kwandiri irumbidzo huru) asi munzwi anofunga kuti nyaya iyi inozvidza uye ndaunza semuenzaniso nyaya dzaR. Chaim (by the way R. Chaim angadaro namata nezvazvo katatu pazuva kuti usayeuke chero chinhu kunze kweiyi Torah humwe humbowo hunopesana naRabbi Shefilot Assistants) uye zvinoratidzika kwandiri kuti rabhi akandipindura kuti zvimwe zvinorambidzwa uye mukuita izvi akandiudza kuti semudzidzi weshiva muAmerica ikoko. dzaive sarudzo dzemutungamiri wenyika ndinofunga nezvemutungamiri ainzi Johnson uye vaive negurukota reyeshiva nezita iroro uye musoro wavo weshiva wakanyura mukudzidza pavakamuudza The Rosh Yeshiva akashamisika kuti sei gurukota reyeshiva rakava Mutungamiriri weUnited States nehusiku humwe.
11 muNissan 04 - 2022/20/15 naXNUMX:XNUMX
R. Chaim of the pan is R. Chaim of Brisk
12 muNissan 04 - 2022/01/06 naXNUMX:XNUMX
Izvozvo zvinobva kupi? Chero zvazvingava, chinhu chikuru ndechokuti isu tose tinobvuma kuti haisi R. Chaim Welder
12 muNissan 04 - 2022/02/15 naXNUMX:XNUMX
Zvinonzi Rabbi Chaim wekuBrisk akatora mapani nemapoto kunze kwemaonero, zvichireva kuti munhu haafanire kunyatsoziva kuti pani yakagadzirwa sei uye kuti chiyero chiri pakati pehurefu hwemubato uye dhayamita yepasi, asi. asi kuziva zvivakwa zvayo zvinodiwa zvine chekuita ne halakhah uye halakhah. Nokudaro zvakaitika kuti kwete nenzira yakajairika hapana chikonzero chokuti mwana anzwisise kuti chii chaizvo asi chete kuti vanoita chimwe chinhu kwete nenzira yaanoita uye kune marudzi ose emitemo, uye kunzwisisa kwake halakhic hakuna kukuvadzwa mukati. chero chinhu.
Muzhinji, chete R. Chaim ndiye R. Chaim weBrisk (zvichida munzvimbo dzinobatwa muGemara pane Halacha), sezvakaita Rashba chete R. Shlomo ben Aderet uye kwete Rash Mashantz, kunyange zvazvo kukudzwa kwe zvose zviri zviviri zvikuru.
Gumi nembiri yeNissan 12 - 04/2022/17 pa50:XNUMX
Rabhi makandiitira nyasha here nokuda kwenyaya yandakanzwa muchirevo chechinyorwa ichi:
Ndinoyeuka kuti muchidzidzo chandakapinda, rabhi aidzidzisa chidzidzo chacho akatiudza (vose vatori vechikamu vaiva varume) kuti aidzidzisa chidzidzo cheGemara chokuvaka seminari, uye chaiva muTractate Yavmot.
Akatiudza kuti akadhirowa pabhodhi "mhuri" yose yenyaya yacho ndokuisa maX pa "vakafa" vose ndokubva atarisa kumashure ndokuona kuti zviso zvevasikana zvakatya.
Vakanzwira tsitsi "vakafa" vakapendwa pabhodhi.
Zvekutaura takaseka tose tichisekerera nyaya yacho.
Siya mhinduro	kanzura
Kuodha zvidzidzo, unogona kubata Dafna Avraham nerunhare kana WhatsApp
Iko kuunganidzwa kwezvakarekodhwa zvemakosi apfuura (kufunga kwakadzama, yeshiva kudzidza, kufunga kwehuzivi, yemazuva ano uye epamusoro uye ekugadzira Judaism) inogona kutengwa kubva kuDaphne pa052-3322444, zvakare yeNIS 250 pakosi.
Iyo itsva edition yepaperback trilogy ikozvino yaburitswa, iyo inosanganisira akawanda ekugadzirisa, asi izvi zvinonyanya kudhindwa zvigadziriso uye hapana shanduko yakakosha mairi. Mukuwedzera kwakauya kutumirwa kwemabhuku matsva.
Mabhuku anotengeswa seazere trilogy ye180 NIS kana 70 NIS yebhuku rimwe chete. Dzinogona kugamuchirwa mungave muLodhi kana muJerusarema, kana kuti nenhume kuenda kumba nemutengo we42 NIS.
Pamusoro pazvo, kune mamwe mabhuku akati kuti “Hakuna Munhu Anotonga Nomweya” kubva mushanduro yekutanga. Inogona kutengwa nemutengo wakaderera (30 NIS). A trilogy set nemamwe maviri matsva 150 NIS.
Zvekubvunza uye kutenga: Daphne 052-3322444
Nyowani: Digital makopi emabhuku etrilogy: Yekutanga yakawanikwa
Hakuna munhu anotonga mumweya
Anofamba pakati pekumira
Live zvidzidzo muZoom
Live makirasi kuZoom anoitwa panguva dzinotevera:
China, 20: 45-22: 00
Chishanu, kamwe chete mavhiki maviri, 9: 00-10: 00
Mushure mezvidzidzo pachava nehurukuro yakazaruka yemibvunzo iyo vatori vechikamu vachada kukurukura sezvavanoda (kunyangwe iyo isingaenderane nechidzidzo). Zvidzidzo zvese zvakarekodhwa uye kuiswa locate. Iwe unogona kuwana iyo zoom zvidzidzo kirasi pane inotevera link:
Kujoinha boka reWhatsApp neruzivo nezve makirasi uye zuva rawo, tumira email ku: orenmarg@gmail.com
“Kuipa kukuru kwekutya Mwari kana kusina kubatanidzwa zvakanaka nechiedza cheTorah ndechokuti panzvimbo yekutya chivi, kunotsiviwa nekutya kufunga, uye sezvo munhu anotanga kutya kufunga, anonyudzwa mundangariro. madhaka ekusaziva, anotora chiedza chemweya wake. , Uye anokora mweya wake ”(Rabbi Kook, Eight Files, A. Razz)
"Uye naizvozvo hazvina kukodzera kubvisa chero chinhu chinopesana nemafungiro ake, rudo rwekubvunza uye ruzivo." Asi, chinhu chakaita seichi chinotaurwa: Taura zvakawanda sezvaunoda… nekuti mazwi eanopikisa muchitendero anonyangarika, haasi (asi) chete mukusava nesimba kwechitendero… nekuti pfungwa dzinoda kuti pasave nedziviriro. pazvese Zvese… uye nemurume uyu zvinouya kune zviri mukati mechokwadi chezvinhu uye kumira pachokwadi chakakwana, uye hapana kuvharirwa kune zvinhu zvakaita seizvi. Kune gamba rega rega rinoda kupikisa mumwe kuti aratidze hugamba hwake, rinoshuvira zvikuru kuti uyo anouya kuzorwa naye akunde nepaanogona, uyezve, kana akakunda [gamba] rinouya kuzomukunda zvinoita sekunge uyo anokunda ane mhare zvikuru.” (Beer Hagola, Beer Shiva, iyo Maharal kubva kuPrague).
Zvekutenga mabhuku akaderedzwa
Kujekeswa uye fungidziro kune vaverengi
Iyo saiti peji reFacebook
Gamuchira zvinyorwa zvitsva neemail
Join vamwe 3,092 vanyoreri
Kuti uwane rondedzero yezvose zvakatumirwa
Unofungei nezve Oslo Accords?
Zvigaro zvidiki VS chikoro chepamusoro zvigaro
Kuzviuraya here? Zvirinani maererano naThos.
Kune avo vanofarira kutevera mhinduro zviri nyore zvinokurudzirwa kusaina kune torch yekutaura pazasi maturusi.
Nguva pfupi yadarika
musawedzera kwazviri kana kutapudza kwazviri On Pindura kumushandirapamwe weNida
kupera On Nekufa kwemushakabvu Prof. David Halvani Weiss (column 485)
Mhuka yake On Nekufa kwemushakabvu Prof. David Halvani Weiss (column 485)
Jonatani Sharom muNachioni On Nekufa kwemushakabvu Prof. David Halvani Weiss (column 485)
Yishai On Mhinduro kumubvunzo pamusoro pezvidzidzo
Kuti uwane rondedzero yakawedzerwa yezvazvino zvakataurwa
WhatsApp boka revaverengi vesaiti
Teregiramu chiteshi chekugadzirisa zvinyorwa
© 2022 Rabhi Michael Avraham | Powered by Astra WordPress Dingindira